थाहा पाईराख्नुहोस् कुनबार जन्मिनेको कस्तो हुन्छ स्वभाव र भाग्य ? हेर्नुहोस् आफ्नो भाग्य !::Nepal's Digital Paper
थाहा पाईराख्नुहोस् कुनबार जन्मिनेको कस्तो हुन्छ स्वभाव र भाग्य ? हेर्नुहोस् आफ्नो भाग्य !
एजेन्सी – हामी जुन बार जन्मिएका हुन्छौ सोहि जन्मबारको प्रभाव जीवनभर बन्छ। ज्योतिष बिधि अनुसार हरेक बारका स्वामी ग्रह अलग–अलग हुन्छन् । त्यसैले जन्म बारको आधारमा कुनैपनि व्यक्तिको स्वभावबारे धेरै कुरा जान्न सकिन्छ।
१. आइतबार जन्मेका यस्ता हुन्छन्
आइतबार जन्मिएका व्यक्तिहरु भाग्यमानी हुन्छन। यस्ता मानिसहरुको आयु पनि निक्कै लामो हुन्छ। समाज, परिवार र साथी भाईहरुबाट सम्मान प्राप्त हुन्छ। यी व्यक्तिहरुमा धर्म प्रति निक्कै धेरै रुचि हुन्छ। आइतबार जन्मिनेहरु सबैलाइ खुसि राख्छन् ।
२. सोमबार जन्मेका कस्ता हुन्छन रु
सोमबार जन्मिएका व्यक्तिहरु हंसमुख हुन्छन् । यी व्यक्तिहरु निक्कै मिठो पनि बोल्छन। यीनीहरु निक्कै ज्ञानी र बहादुर पनि हुन्छन। यो दिन जन्मेकोमानिसलाइ सबै किसिमको सुविधा प्राप्त हुन्छ भने मेहेनती स्वभावका पनि हुन्छन। यो दिनमा जन्मेकाहरुलाई कफको रोगले सताउने देखिन्छ।
३. मंगलबार जन्मेका नेता
मंगलबार जन्मेका व्यक्तिहरु उग्र स्वभावका हुन्छन। यो दिन जन्मेका व्यक्तिहरु प्राय विवादमा फंसी रहन्छन्। यी ब्यक्तिहरु निक्कै सहासी, बहादुर र रचनात्मक पनि हुन्छन्। यो बार जन्म भएका कुशल नेता पनि हुन्छन। मंगलबार जन्मेकाहरु प्राय तनाव पनि महसुस गर्छन र यी व्यक्तिहरुलाई छाला रोग पनि हुन सक्छ।
४. धार्मिक चाहीं बुधबारका
बुधबार जन्मेका व्यक्तिहरु धार्मिक र निक्कै नै तेजिलो दिमाग भएका हुन्छन्। यी ब्यक्तिहरु निक्कै मिठो बोल्छन् भने बुद्धिको प्रयोग गरेर गरिएका कार्यहरु निक्कै लाभदायी हुन्छन् । कहिलेकहीं यी मानिसहरुमा लापरवाही स्वभावपनि देखिन्छ। यी व्यक्तिहरु बहुमुखी प्रतिभाका हुन्छन र सजिलै अरुलाइ आफुतिर आकर्षित गर्न सक्छन् ।
५. बिहिबार जन्म भएका असाधारण
यी व्यक्तिहरु निक्कै बुद्धिमान हुन्छन भने कठिन स्थिति र समस्या ग्रस्त अवस्थामा कहिले पनि डराउदैनन् र डगमगाउदैनन। यी व्यक्तिहरु निक्कै असल मित्र हुन्छन र केहि कुराहरुमा निक्कै कट्टर पनि हुन्छन। यी हसिला र खुसि स्वभावका व्यक्तिहरु निक्कै भाग्यमानि पनि हुन्छन। बिहिबार जन्मेकाहरु केहि असाधारण व्यक्तित्वका हुन्छन।
६. कुशल वक्त्ता शुक्रबारका
यी व्यक्तिहरु एकदम कुशल वक्ता हुन्छन। यी सहनशील व्यक्तिहरु समस्या आइपर्दा र कठिन स्थितिमा कहिले पनि डराउदैनन। करियरमा यी व्यक्तिहरु निक्कै सफल हुन्छन् र बुद्धिमान पनि हुन्छन् । समाजमा यस्ता मानिसहरु सम्मानित हुन्छन् ।
७. शनिबार जन्मेकाको रुचिमा प्राबिधिक क्षेत्र
यी व्यक्तिहरुलाइ प्राविधिक कार्यको क्षेत्रमा निक्कै नै रुचि हुन्छ। सानो उमेरमा यी व्यक्तिहरुलाईघर, परिवार, स्वास्थ र व्यक्तिगत समस्याले धेरै सताउछ। मित्रतामा यी व्यक्तिले सावधानी अपनाउनु पर्नेहुन्छ। घरबाट सुख प्राप्ति हुन्छ भने कृषि र ब्यापारबाट पनि निक्कै लाभ मिल्छ। शनिबार जन्मेकाले अरुको इर्ष्या गर्छन् र जोखिम उठाउने हिम्मत गर्दैनन् ।